Chelsea oo Kooxda Manchester United ka af-duubanaysa dalabka ay ku doonayso da’yarka Jude Bellingham – Gool FM
(London) 29 Mar 2019. Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay raadinayso inay ka afduubato iskudayada Manchester United ee ay kula soo wareegayso da’yarka kooxda Birmingham City ee Jude Bellingham.
16-sano jirkaan ayaa si joogta ah loola xiriirinayay inuu u wareegayo Kooxda uu hoggaamiyo Ole Gunnar Solskjaer xilli ciyaareedkaan, isagoo diiwaan-geliyay afar gool iyo saddex caawin intii lagu jiray xilli ciyaareedkii 2019-20.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay Wargeyska Daily Mail, Wakiilada Bellingham waxay wadahadallo la yeesheen Chelsea ka hor inta uusan UK xirmin kaddib caabuqa faafa ee Coronavirus.
Faafida caabuqa COVID-19 ayaa saameyn aan wanaagsaneyn ku yeelatay garoonka dhexdiisa iyo bannaankiisaba, warbixinta ayaa sidoo kale sheegaysa in heshiis kasta oo da’yarta loo soo bandhigo ay caqabad ku noqon karto haddii xilli ciyaareedka uu u dhacayo illaa xagaaga.
Xiddigan Jude Bellingham ayaa kooxdan waxa uu ku soo biiray sanadkii 2019-kii isagoo u saftay 32-kulan wuxuuna dhaliyay 4 gool tan iyo markii uu ku soo biiray Kooxda Birmingham City.
Kaliya ma'ahan Lautaro Martinez, Barcelona oo weerar ku ah khadka dhexe ee Kooxda Inter Milan